को esophagus को क्यान्सर - एकदम अक्सर मानिसहरूले भयानक रोग छ। अक्सर यो रोग वर्ष खराब बानी वृद्ध मान्छे असर गर्छ। थप र, पुरुषहरु मा क्यान्सर को यो फारम।
को esophagus को क्यान्सर। कारण
त्यहाँ उद्भव र esophageal क्यान्सर थप विकास गर्न योगदान धेरै कारक हो। तिनीहरूलाई को - यो तातो खाना को अत्यधिक खपत छ। रक्सीको दुरुपयोग - रोग को लक्षण अर्को कारण। यो विशेष गरी साँचो अन्यसरोगेट पेय छ।
त्यहाँ एक भौगोलिक कारक हो। त्यसैले, रोग चीन, एशिया र इरान मा हुन्छ। डाक्टर स्थानीय मान्छे को आहार मोल्ड र scalding चिया संग marinated मशरूम को व्यञ्जन समावेश छन् भन्ने तथ्यलाई यो विशेषता। बारी मा, ताजा फलफूल र तरकारी तिनीहरूले कम खान्छन्।
यस्तो र सी रूपमा भिटामिन को कमी, esophageal क्यान्सर हुन सक्छ। को esophagus जीवनमा कहिल्यै क्षार भस्म थियो भने घातक ट्यूमर को घटना को सम्भावना, ती अवस्थामा उत्पन्न हुन्छ। अन्तमा, रोग को कारण गंभीर र esophageal रोग हो। उनलाई, achalasia, वा बीचमा बैरेट गरेको esophagus।
esophageal क्यान्सर को लक्षण
अन्य घातक रोग लागि उपयुक्त हो जो esophagus को क्यान्सर को लागि विशेषता लक्षण। त्यसैले, आफ्नो उपस्थिति संवेदन, आफ्नो डाक्टर संग परामर्श गर्न निश्चित हुन। पहिले, एक महत्वपूर्ण कमजोरी र थकान छ। थकान त्यसैले, यो कम छ र दक्षता, धेरै चाँडै आउँछ। दोस्रो, कुनै पनि कारण बिना तापमान खडा गर्न सकिन्छ। चासो आहार स्थायी निभाउँछ। यो खाना गर्न अनिच्छा पनि देखा पर्न सक्छ। यसैले वजन हानि।
सीधा esophageal क्यान्सर को लक्षण लागि जाँदा, तिनीहरूले एकदम उज्ज्वल देखिन्छन्। यो खाद्य esophagus मार्फत खराब पासेसहरू छ कि भावना संग सुरु हुन्छ। सुरुमा, यो धेरै सानो महसुस, तर प्रत्येक समय बलियो बन्ने छ। यो लक्षण रोगी र्याल निल्छ पनि गाह्रो हुन्छ भन्ने त्यस्तो हदसम्म आउँछ।
ट्यूमर को विकास देखा पर्न छाती दुखाइ। झन्, तिनीहरूले प्रकृतिका जल छन्। परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ आवाजको टोन। रोग को प्रगति संग र जटिलताहरू विकास:
को esophagus मा आक्रान्त,
को esophagus मा मार्फत प्वाल को घटना।
बिल्कुल नै प्रकट गर्न थाले भन्ने जटिलताहरुलाई सबै, तत्काल चिकित्सा ध्यान आवश्यक। esophageal क्यान्सर को मेटास्टेसिस फेफडों, हड्डी, कलेजो र पनि मस्तिष्क असर गर्न सक्छ।
को esophagus को क्यान्सर। निदान
त्यहाँ सँगै पनि विकास प्रारम्भिक चरणमा मा, esophageal क्यान्सर पत्ता लगाउन सक्षम छन् कि तीन विधिहरू छन्। यो एक्स-रे परीक्षा, बायोप्सी र gastroscopy। ट्यूमर proliferation र रूपमा Computed टोमोग्राफी गर्न resorted मेटास्टेसिस, पत्ता लगाउन जिगर, को अल्ट्रासोनोग्राफी चुम्बकीय अनुनाद उपचार।
Esophageal क्यान्सर उपचार
को esophagus को घातक ट्यूमर को उपचार को प्रभावकारी विधि शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप छ। अक्सर मूर्त लाभ र ल्याउँछ रेडियोथेरेपी। अक्सर कि चिकित्सकहरु संयुक्त उपचार विकल्प सल्लाह दिन्छन्। यो रोग मा अलग केमोथेरापी किनभने यो रोगी मदत गर्न सक्दैन, गर्न प्रयोग गरिएको छ।
यस्तो रोग मा सर्जिकल हस्तक्षेप गर्ने esophagus पूरा हटाउने समावेश छ। परिणाम सञ्चालन बाहिर छ र विकिरण चिकित्सा पनि पछि, nicer हुन।
रोगी उमेर, ट्यूमर आकार र मेटास्टेसिस आधारमा, रोगी गरेको रिकभरी लागि पूर्वानुमान फरक हुन सक्छ। यसलाई व्यक्तिगत रूपमा अवस्थामा विचार गर्न आवश्यक छ।
क्यान्सर को यो फारम जोगिन खराब बानी, साथै आहार को normalization छुटकारा गर्न मद्दत गर्नेछ। निस्सन्देह, यो आवश्यक सकेसम्म तिनीहरूले यस्तो गम्भीर परिणाम निम्त्याउन थिएन त्यसैले कि, esophagus को रोगहरु पत्ता लगाउन छ।
ओन्कोलजी - एक खतरा वा मद्दत छ?
स्तन क्यान्सर - कारणहरू, लक्षण र रोकथाम
स्तन क्यान्सर: लक्षण, निदान, कारण
घातक निदान - थाइरोइड क्यान्सर लक्षण
सानो सेल फेफड़ों को क्यान्सर: निदान, उपचार, प्रोजनिसिस
अन्डा बिना स्वादिष्ट र सजिलो केक
साशा र Tanya: श्रृंखला को अभिनेता "SashaTanya"
बेतलेहेममा हाम्रो लेडी को प्रतिमा। अर्थोडक्स प्रतीक। सन्तहरू प्रतीक
एकाधिकार - एकाधिकार अर्थव्यवस्था छ ...: प्रभाव, संघर्ष र इतिहासको विधिहरू
के कताई छ? लोकप्रिय मोडेल, उपकरण, माछा मार्ने
पत्रुस 1 Nikitin, पत्रुस 1 को पत्रुस 1 ऐतिहासिक पोर्ट्रेट को पोर्ट्रेट को पोर्ट्रेट
एक oligarch कसरी विवाह गर्न?